Shariif Sheekh Axmed oo hoygiisa ku qaabilay Madaxweyne Qoorqoor – AfmoNews
Shariif Sheekh Axmed oo hoygiisa ku qaabilay Madaxweyne Qoorqoor
Shariif Sheekh Axmed, Madaxweynihii hore ee Somaliya ayaa xalay hoyga uu ka degan yahay Magaalada Muqdisho ku qaabilay Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor).
Gudoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran iyo Madaxweynaha Galmudug oo kulanka ku keli ahaa ayaa looga hallay muranka hareeyay Guddiyada Doorashooyinka Qaranka.
Wararka laga helayo kulankaasi ayaa sheegaya in Shariif Sheekh Axmed uu Madaxweyne Qoorqoor u sheegay inaanan lagu kalsoonaan karin Guddiyada Doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleedba, maadaama ay ku jiraan sida uu sheegay xubno ka tirsan Hay’adda NISA iyo Shaqaalaha Rayidka.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in Shariifka uu Qoorqoor u bandhigay inuu ka laabto magacaabidda Guddiyada Doorashooyinka iyo Xalinta Khilaafaadka, ee dhanka Galmudug ka imaanaya, inkastoo uu Qoorqoor ku dooday in xubnahaasi ay yihiin kuwo uu kalsooni badani ku qabo.
Qoorqoor ayaa dhankiisa Shariifka u sheegay in cabashada ay xubnaha Guddiyada Doorashooyinka ka soo gudbiyeen uu la wadaagi doono Madaxda Dowladda Federaalka.
Musharaxiinta mucaaradka ee u tartamaya jegada madaxtinimada ee dalka ayaa toddobaadkii hore sheegay inaysan ka qaybgeli doonin doorasho ay ku sheegeen boob iyo ku shubasho.